Induction Kutisa steel plate neRF induction heat
musha / Applications / Induction Heating / induction kupisa simbi ndiro
Category: Induction Heating Tags: kupisa simbi, yakakwirira frequency tembiricha simbi, induction kupisa mundiro, induction kutengesa steel plate, RF kupisa simbi, simbi induction kupisa, ndiro yesimbi, simbi yekudziya, simbi ndiro induction kupisa
Induction Kutisa steel plate neRF induction heat equipment
Chinangwa Kupisa simbi mahwendefa pane inoendesa system kuitira kuti ubike maWales makeke.
Zvinhu Sirivha ndiro 760 x 440 x XUMUM (10 x XUMUM x XUMUMX in.)
Kupisa 200 ºC (392 ºF)
Zvishandiso DW-MF-45kW induction kudziyisa system, yakagadzirirwa neiri kure basa rekubata ine imwe 1.3μF capacitor. Iyo induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso.
Maitiro Aipamhepo yenyoka yekudziya coil pasi pesimbi simbi yekufambisa inodziya ndiro yesimbi kune tembiricha tembiricha ye200 ºC (392 ºF) mune angangoita maminetsi matatu. Iwo makeke eWelsh anoiswa pahote simbi inopisa uye bika kwemaminetsi 3½. Anotakura anofambisa makeke kubva pairi kwadzakakwenenzverwa. Yechipiri kupfuura pamusoro peoil inobika kune rimwe divi.
• Kuchenesa kupisa kunongedzwa chete kumahwendefa esimbi. Kupisa kushoma kunoratidzirwa kunzvimbo dzinobatana.
â € ¢ Yakachengeteka, yakagadzikana kushanda kwemamiriro evanoshanda
â € ¢ Kuderedza kushandiswa kwemari kunofananidzwa nevesheni inopiswa nemoto.
Yakadzikira mutengo yekumhanyisa mweya mamiriro nekuti mashoma kupisa anoburitswa munzvimbo yekushanda.
Induction Heating Wire Inopera